သင်၏အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဈေးကွက်တင်ခြင်း - Nicheonlinetraffic
သငျသညျသေချာပရိုမိုးရှင်းများ, ဈေးလျှော့ပေးခြင်းကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများမြင်လည်းတီဗီနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကြေငြာခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကြောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်သာကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းမှဒါပေမယ့်လည်းအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှလျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
Marketing ကိုမဆိုအသေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှအဓိကအင်အားစုတွေတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များကသင်၏န်ဆောင်မှု / ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုအကြိမ်အရေအတွက်ကိုနားထောငျဖို့နဲ့သင်သာစျေးကွက်မှတစ်ဆင့်ဒီအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Marketing ကိုအမှန်တကယ်သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်။
သငျသညျအတူတူတစ်ခုစနစ်တကျအစီအစဉ်ချပြီးခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ start ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုတတ်နိုင်သမျှအများအပြားအတှေးအတူတက်လာမယ့်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးမှ-Do-စာရင်းသို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်လွှဲပြောင်း action ကိုပစ္စည်းများကိုရနိုင်ရာမှရည်ရွယ်ချက်များကိုအတူတက်လာရန်သူတို့ကို အသုံးပြု. ဖြစ်ပါတယ်။
ဖောက်သည်များ၏ input ကိုရရှိရန်ကြိုးစားပါ။ ဖောက်သည်ကိုသူတို့ခံစားရဘယ်သို့ဆိုပါစို့။ သင်သည်သင်၏အမှားများထုတ် ironed ရနိုင်အောင်သင်တစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်လျှင်သင်ဥပမာအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်သာအဖြစ်အပျက်ရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် website တစ်ခု Create
အင်တာနက်ယနေ့ကမ္ဘာကြီး၌, သင်တတ်နိုင်သမျှပထမဦးဆုံးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်က်ဘ်ဆိုက်အရသေချာသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလားအလာဖောက်သည်များ၏ 95% ပထမဦးဆုံးအပင်န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ဘို့သင့်ကိုချဉ်းကပ်ရှေ့၌သင်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကရဖို့သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီများမှ / လုပ်ငန်းအမည် Google လိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်, သင်သည်သင်၏ website ကိုပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ပါတယ်။ ယနေ့လူကိုပိုပြီး၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများထက်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့လေ့ကတည်းကဒါဟာဖော်ရွေမိုဘိုင်းဖြစ်သင့်သည်။
သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ရှာနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုနားလည်မှသကဲ့သို့သင့်ရဲ့ website မှာရန်အသွားအလာကိုခြေရာခံရန်, သင်သည် Google analytics ကိုသုံးနိုင်သည်။
ယနေ့တွင်လူတိုင်းနီးပါးလူမှုမီဒီယာအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ကိုမလျှင်, Twitter သို့မဟုတ် LinkedIn တို့သို့မဟုတ် Instagram ကိုအပေါ်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်။
အကြီးမြတ်ဆုံးအခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ခုမှာ Facebook မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်န်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်အကြောင်းပြောဆိုနိုင်မည့်သင့်ရဲ့သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် Facebook အကောင့်ကိုဖန်တီးသင့်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်နေဆဲန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များအတွက်တောင်းဆိုရန်သင့်ရဲ့ပို့စ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းဘို့ပဌနာပွုမညျ့သူအလားအလာဖောက်သည်များ၏ကျယ်ပြန့်အခြေစိုက်စခန်းရှိပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. တက်ကြွစွာအွန်လိုင်းပံ့ပိုးဖြစ်လာ
ယနေ့ခေတ်, သင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာဖို့သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏နာမတော်အဘို့ကိုတောင်းဆိုဖို့မလိုပါ။ ခဏပြီးနောက်, လူများကအကြောင်းပြောနေတာစတင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ပင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့်န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
Google က AdWords အအသုံးပြုမှု Make
AdWords အရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြော်ငြာတဲ့ထိပ်တန်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ AdWords အသငျသညျယဇျပူဇျောန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၏ကြင်နာဖို့တိကျတဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါ့အပြင်အစားသူတို့ထဲကသိပ်အများကြီးသုံးပြီး၏, သင်ရုံအနည်းငယ်သော့ချက်စာလုံးများကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။
AdWords အအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်တိကျတဲ့ပထဝီတည်နေရာအနေဖြင့်ဖောက်သည်များပစ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးအလမ်းကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပေမယ့်, သင့်ဘတ်ဂျက်ပိုမိုမြန်ဆန်သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းထက်ထွက်သွေးထွက်မယ်အဖြစ်ဤအတူအရူးမသွားကြပါဘူး။ Apply ကို AdWords မှအခြားရွေးချယ်စရာ သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာထဲမှာ။
သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအများအပြားကွန်ရက်များတည်ထောင်နေဖြင့်ဒေသခံအသိအမြင်ဖန်တီးသင့်ပါတယ်။ ကွန်ရက်မှတဆင့်, သင်အငြိမ့်မြောက်မြားစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရလိမ့်မယ်။ သငျသညျ, စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များ join အခန်းများ join နှင့်လည်းအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းနိုင်ပါ။
ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်သည်လည်းအားကစားဖြစ်ရပ်များတစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းသောသင်တန်းဆီသို့ဦးတည်ကြောင်းမဆိုလှုပ်ရှားမှုစပွန်ဆာနိုင်ဘူး။ ဒါ့အပြင်သငျသညျ (ကကြီးမြတ်ဥပမာတီရှပ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးထုပ်သည်) သင်၏လုပ်ငန်းအမည်, ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့်လိုဂို baring မြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကိုဝေးပေးသင့်
နေနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သင်ပျော်ရွှင်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များစောင့်ရှောက်ဖို့အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပူဇော်သင့်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဖောက်သည်များအကြားသစ္စာရှိမှုဖန်တီးပေးပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့်သင့်ရဲ့ website အတွက်အသွားအလာဝယ်ယူ။ သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းလူတွေကိုပြောပြရန်ရှိသည်။ သငျသညျသူတို့သည်သင်တို့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူသို့မဟုတ်သင့်န်ဆောင်မှုများနှင့်မဆိုအခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်သူတို့ကိုပြောပြရန်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများ / န်ဆောင်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ရှိသည်။
ကြော်ငြာအချိန်နှင့်သယံဇာတစားသုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်သော်လည်း, ကအဆုံးမှာကောင်းစွာပယ်ချေ။ သငျသညျသောသင်တသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်းသေချာသင့်ပါတယ်။ သငျသညျထပ်တလဲလဲအမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများကမပိုလျှင်သူတို့ကိုမည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှအဘို့သင့်ဖောက်သည်သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏အနည်းဆုံးခုနစ်ကြိမ်စကားကိုနားထောငျသငျ့သညျဟုဆိုကြသည်။ သငျသညျကလူ, သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသိမွငျကွားသေချာတဲ့အချက်ပါစေသင့်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာမြင်သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြင်လျှင်မထားနဲ့သူတို့ကအကောင်းဆုံးကြောင်းဖျောင်းဖျခံရတက်အဆုံးသတ်မည်ဆိုပါကသတိရပါ။